Kupona Mars: Space Race Inotangisa Mbudzi 15 yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uri mudiwa wepadenga, iwe unoda mapuraneti kana iyo nhangemutange yemuchadenga, saka haugone kupotsa uyu mutambo wevhidhiyo uyo unokutapa. Kupona Mars: Space Race Ndiro zita rawanga uchitsvaga, uye rinowanikwawo kuti riiswe pane yako GNU / Linux kugovera, kuti iwe ugone kushandisa maawa uchivaraidza kuvaka budiriro uye kupona papuraneti dzvuku. Uye uku kuwedzerwa kwemusoro wepakutanga kuchazotangiswa munaNovember 15, 2018, ndiko kuti, mumazuva mashoma chete uchave uine zviripo zvekutora zvimwe zvemukati kana iwe watove nemutambo.
Space Race iri kuwedzera kubva Kupona Mars, iyo yatakatotaura nezvayo muLxA zvisati zvaitika, inonakidza kwazvo. Iyo yepasi vhidhiyo mutambo watove unonakidza nekuda kwetimu yayo, kutamba kwayo, magirafu, nezvimwe, asi ikozvino nekuwedzera uku kuchatonyanya kunyanya. Nenzvimbo yeRace inochinja iyo Gameplay uye nekunzwa kwakawanda nenzira yakanyanyisa. Zvino isu tinokuudza iwe nhau dzaunogona kuwana neichi chitsva chinotakurika zvemukati ...
Nenzira, usati waenda kune zvemukati wekuwedzera, iwe unoziva kuti inowanikwa muzvitoro Chitoro chinozvininipisa, GOG uye Steam, kwaunogona kutsvaga zita rayo muinjini yekutsvaga yainayo kuti vakutumire iwe zvakananga pawebhu kwaunogona kutenga nekuitora. Zvakanaka, nezve izvo zvitsva:
Dambudziko nyowani neAI yevaikwikwidza avo vane chinangwa chekukwikwidza uye kuzvimisikidza pachavo mukufora kune simba. Kurwa kuti uve mukuru wesimba paMars.
Zvinangwa zvitsva zvinofanirwa kuzadzikiswa mutambo wevideo yekoloni uchienderera mberi.
Mari yakawanda, asi mamwe matambudziko… nyika nyowani dzinowanikwa sevatsigiri.
Nhaurwa dzemukati dzauchazoona panguva yemutambo uye izvo zvichakupa pfungwa yepanorama ...
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve base vhidhiyoogame, unogona kutarisa pano, kwatinotozivisa zvitsva zvemapakeji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kupona Mars: Space Race inotangisa Mbudzi 15 yeLinux